Taliyaaniga oo gaadiid ciidan siiyey booliska iyo milateriga Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
2nd April 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Dowladda Talyaaniga ayaa waxa ay gaadiid dagaal ku wareejisay ciidanka Milateriga iyo Booliiska Soomaaliya.
Kulanka oo ka dhacay xarunta Xalane ee Magaalada Muqdisho, ayaa dowladda Taliyaanigu booliska Soomaaliya kula wareejisay 10 gaari, halka 12 kale ay ku wareejisay ciidanka Milateriga.
Taliyaha ciidanka Milateriga Soomaaliya Jen. Indhaqarshe ayaa goobta ka sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo dowladda Talyaaniga kaalmada ay la garab taagan tahay dowladda Soomaaliya.
Wuxuu sheegay in ciidamada qalabka sida ay yihiin dhalaan yar oo u baahan garab qabasho, dowladda talyaanigana uu ka codsanayo in la garab qabto.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya C/weli Sheekh Axmed ayaa dhankiisa ka mahadceliyay tallaabada dowladda Talyaaniga ku caawinayso dowladda Soomaaliya, isaga oo ka hadlay xiriirka Talyaaniga iyo Soomaaliya.
Safiirka dowladda Talyaaniga ee Soomaaliya Amb. Andrea Mazzello ayaa sheegay in marwaliba ay Soomaaliya garab taagan yihiin oo ay taageerayaan.
Amb. Andrea Mazzello ayaa xusay in taageerida dawladda Talyaaniga ee dawladda Federaalka Soomaaliyeed ay ka tahay daacad, ayna doonayaan inay si toos ah ula tacaamulaan dawladda iyo hogaankeeda.
Ma aha markii ugu horreysa ee ciidamada Soomaaliya gaadiid ciidan ka helaan dowladdo shishiye, waxaana horay dalal kala duwan Soomaaliya u siiyeen gaadiid kala duwan.